၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေအထူးရွေးကောက်ပွဲအစီအစဉ်
412 December 5, 2015
558 December 4, 2015
485 December 4, 2015
388 December 1, 2015
462 November 29, 2015
146 November 29, 2015
၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအထူးအစီအစဉ်
470 November 28, 2015
၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အထူးအစီအစဉ်
603 November 23, 2015
330 November 22, 2015
မန္တလေးတိုင်း၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်မှာ သင်ရိုးသစ်သင်တန်းတက်တဲ့ မူလတန်းပြ ဆရာသုံးယောက်ကို ဂစ်တာတီးတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့အဖွဲ့က ရိုက်နှက်[...] The post ဂစ်တာတီးသည့် မူလတန်းပြဆရာ ၃ဦးကို ရိုက်နှက်လက်ထိပ်ခတ်သည့်ကိစ္စကန့်ကွက် appeared first on DVB.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ တရုတ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဆန်ဂေါင်ဇင်းဟာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်[...] The post မူဆယ်တွင်တိုက်ခိုက်ခံရသည့်ကိစ္စ တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ကာချုပ်ဆွေးနွေး appeared first on DVB.
၆လဘတ်ဂျက်အတွက် ဗဟိုဘဏ်ကနေ ကျပ် ၆၀၀ ဘီလီယံ ကျော်ချေးရန် လွှတ်တော်တင်ပြ
အခုလက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ် ၆ လ ဘက်ဂျက်အတွက် အပ်ငွေစာရင်း လိုငွေဖြည့်ဆည်းဖို့ ဗဟိုဘဏ်ကနေ ကျပ် ၆၀၀[...] The post ၆လဘတ်ဂျက်အတွက် ဗဟိုဘဏ်ကနေ ကျပ် ၆၀၀ ဘီလီယံ ကျော်ချေးရန် လွှတ်တော်တင်ပြ appeared first on DVB.
ကိုရီးယား တစ်ယောက်၊ ထိုင်း နှစ်ယောက်၊ မြန်မာ နှစ်ယောက်စုစုပေါင်း ကောင်မလေး ငါးယောက်နဲ့ ပါဝင်[...] The post ဒီဗွီဘီရန်ကုန်ရုံးကိုရောက်လာတဲ့ Rose Quartz K-Pop အဖွဲ့ (ဓာတ်ပုံ) appeared first on DVB.
ရန်ကုန်ကမ်းနားလမ်းညဈေးတန်း စီမံခန့်ခွဲခွင့် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီကို လွှဲပေးမည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၈၀၀၀ သုံးစွဲဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ ကမ်းနားလမ်း ညဈေးတန်းရဲ့ စီမံခန့်ခွဲတာကို ပုဂ္ဂလိကုမ္ပဏီတခုကို လွှဲပေးတော့မယ်လို့[...] The post ရန်ကုန်ကမ်းနားလမ်းညဈေးတန်း စီမံခန့်ခွဲခွင့် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီကို လွှဲပေးမည် appeared first on DVB.